SMS Transfer in macruufka 7 ka Phones Old (macruufka, Android, Symbian)
> Resource > Transfer > SMS Transfer ka macruufka, Android, iyo Symbian Phones in macruufka 7/8/9
"Kaliya iibsaday xaaskayga 5S iPhone ah hadiyad dhalashada. Laakiin iyadu way u baahan yahay fariimaha qoraalka ah kala iibsiga ka phone android jir ah u macruufka cusub 7. Tani ma suurto gal ah? Haddii ay sidaas tahay, sida loo sameeyo?"
Waxa ay u malaynayeen in ay waayo-aragnimo u wanaagsan in ay u baddashaan iPhone socda macruufka ah 7. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ayaa ka cabanaya in aysan ku wareejin karin fariimaha qoraalka ah oo ka soo telefoonada jir (macruufka, Android, ama Symbian) si ay u macruufka cusub 7 qalab. Taas darteed, iyagu ma sii wadi karo wada hadalka qaarkood si habsami leh. Ka dib markii aan muddo dheer ku qodo ee internetka lagu doonayo si loo nuqul fariimaha qoraalka ah si an macruufka 7 qalab, waxaan u malaynayaa in aan aad ku talin Wondershare MobileTrans .
Wondershare MobileTrans Waa qalab dhamaystiran oo kuu ogolaanaya inaad si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka telefoonada socda ee macruufka 6 iyo hore, Android, iyo xataa Symbian in macruufka 7 qalabka. Waana arrin sahlan in ay isticmaalaan. Xitaa ma oga xirfado badan oo ku saabsan telefoonada aad, aad si fudud u dhigi kara shaqeeyaan. Hoos waxaa ku qoran, bal aynu eegno sida ay u gudbiyaan SMS si macruufka 7 ka macruufka 6, Android, iyo Symbian (Nokia). Si aad u ogaatid MobileTrans qalabka ay taageerayaan, fadlan riix halkan >>
Download version maxkamad Wondershare MobileTrans!
Tallaabada 1. Daahfurka MobileTrans kombiyuutarka
Ka dib markii aad ka soo dejisan Wondershare MobileTrans oo ku xidh aad Windows PC. Waxay leedahay dhibaato lahayn socda ee Windows 10, Windows 8, Windows 7 iyo sidoo kale kale Windows ka hawlgala nidaamka kombiyuutarka ku salaysan. Waxaa isla markiiba ka dib markii habka rakibidda ka Launch.
Tallaabada 2. SMS Copy in macruufka 7
Ka macruufka 5, macruufka 6 Bedelka SMS si macruufka 7/8/9
Connect macruufka 5 ama 6 macruufka ku salaysan qalabka Apple iyo qalab macruufka 7 aad computer via 2 USB fiilooyinka. Ka dibna waxaad arki kartaa waxa ay soo bandhigeen dhinac. In meel bannaan oo u dhaxeeya, waa in aad calaamadee sanduuqa qoraalka farriinta ah in ay bilaabaan SMS wareejinta ka qalab macruufka 5 ama 6 macruufka u qalab macruufka ah 7.
Copy SMS ka telefoonka ah Android inay macruufka 7
Connect telefoonka aad Android iyo sidoo kale macruufka 7 qalab la your computer. Wondershare MobileTrans Iyaga si deg deg ah lagu ogaan doonaa oo u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose. Ka dibna waxaad ka eegi kartaa sanduuqa fariimaha qoraalka ah si uu nuqul ka SMS ka telefoonka Android inay macruufka ah 7. Ka sokow, fariimaha qoraalka ah, aad awoodo in aad nuqulka xiriirada, videos, sawiro, iyo music in macruufka ah 7. Waxaad ka akhrisan kartaa sida aad u SMS ka Android halkan wareejiyo iPhone >>
U dir SMS ka Symbian (Nokia) telefoonada in macruufka 7
Wixii telefoonada Symbian, inta badan ugu dambeeyay ee telefoonada Nokia si buuxda taageeray. Sida talaabo kor lagu soo sheegay, oo kaliya in ay ku xirmaan macruufka 7 iyo telefoonka Symbian aad kombiyuutarka. Hubi fariimaha qoraalka iyo riix Start Copy si loo bilaabo nidaamka.
Video waxay kuu muujinaysaa sida ay u guuraan SMS si macruufka 7
Download software ah in aad nuqulka SMS si macruufka 7 hadda!